PressReader - Ilanga: 2018-11-22 - Abanye basayibambile, abanye do
Abanye basayibambile, abanye do
Baningi futhi abancane ngeminyaka asebeke bawina i-Idols
Ilanga - 2018-11-22 - Izindaba - AYANDA BUTHELEZI
SELIDUME ledlula ngomncintiswano we-Idols SA wanonyaka njengoba uYanga Sobetwa (17) waseCape Town kunguyena okhale wemuka nesicoco kulo mqhudelwano womculo obukhonjiswa kuMzansi Magic njalo ngeSonto.
Isiqephu sokugcina besingeSonto. Selokhu i-Idols yaqala eminyakeni ewu-15 edlule, isikhiqize inqwaba yabaculi, abanye babo asebanyamalala kule ndima kanti abanye basayibambile.
Sikukhumbuza abambalwa abadle umhlanganiso kulo mncintiswano:- * U-Jody Williams (2007) Njengoba kubatshazwa ukuthi uYanga Sobetwa mncane kunabo bonke asebeke bawina isicoco seIdols, uJody waseCape Town nguyena owaba ngowokuqala omncane ukusiwina kuSeason 4, eneminyaka ewu-17. Yize kungacaci okwamanje ukuthi wenzani, kodwa phambilini ubeke wasebenzisana nomculi waphesheya, uSean Kingston.
* USasha-Lee Davis noJason Hartman (2009)
Ngeke salibaleka isiphithiphithi esenzeka kule sizini ngesikhathi kuphambana izinkomishi ekugcineni. Ngesikhathi kumenyezelwa onqobile, kwamenyezelwa igama likaSasha-Lee njengelihambe phambili ngamavoti awu52.77%. Gwiqiqi, kwathiwa kwenze- ke iphutha akubalwanga kahle ngemuva kokubonakala ukuthi kunamavoti awu-200 000 angene umzuzwana sekuzovalwa ukuvota, abeka uJason Hartman njengonqo- bile.
Ngenxa yokuthi kwase kumenyezelwe ukuthi nguSasha-Lee owinile, kwathathwa isinqumo sokuthi bobabili basithathe isico- co. Le drama yenzeka kuSeason-5. USasha usekhona emculweni kodwa uJason akucaci kahle.
*U-Elvis Blue (2010) Lo mculi, ogama lakhe langempela nguJan Hoogendyk, wawina isicoco sikaSeason-6 ebambene phezulu noLloyd Cele waseThekwini. Lo mculi, owahamba phambili ngamavoti awu-67%, wanquma ukucazelana umklomelo wakhe owawungu-R500 000 ngaleso sikhathi noLloyd. U-Elvis usekuyona indima yomculo futhi uyadlondlobala.
* U-Vincent Bones (2014) UVincent wawina kwiSeason 10. Udaba lwakhe, olwathinta abaningi, lokuthi wakhula engumhambuma, waveza ukuthi uma engawina angathenga umuzi ukuze benomndeni wakhe bezoba nekhaya. Kwezomculo uke wasebenzisana neJeziel Brothers, uKwesta noRJ Benjamin. Akucaci ukuthi kumanje ukuphi.
* UNoma Khumalo (2016) Ngesikhathi eba yingxenye yeIdols Season 12 wayenguthisha. Ugcine ukuzwakala endimeni yomculo ngesikhathi ekhipha isingili ethi‚ "Moving On" abepike kuyona uSketchy Bongo.
Bheka ekhasini 17 (Impilo)
ISITHOMBE NGABE: ELLE
UNOMA Khumalo onqobe kwi-Idols ngo-2016.